युगसम्बाद साप्ताहिक - स्वीस राजदूतको सुझाव “तपाईहरुलाई देश बनाउने एक विशिष्ट मौका छ”
Thursday, 04.09.2020, 12:09pm (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 04.04.2019, 01:31pm (GMT+5.5)
० नेपाल र स्वीटजरल्याण्डबीचको सम्बन्धका मुख्य आयाम के–के हुन् ?
हाम्रो सम्बन्ध सुरु भएको ६० वर्ष पुगिसकेको छ । सुरुमा हामी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न विकासका कार्यक्रममा संलग्न भयौँ किनकि हामीलाई पहाडमा परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने थाहा थियो । हामीले तिब्बती शरणार्थीका लागि गलैँचा उद्योगको विकास गर्न पनि काम ग¥यौं । समय बित्दै जाँदा हामीले विभिन्न चरण पार ग¥यौं ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाअघि हामीले पुल बनाउने, बाटो बनाउने, कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका काम ग¥यौं । बहुदल आएपछि हामीले ती आयोजनालाई सरकारको जिम्मा लगायौँ । अहिले हाम्रो प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारले यस्ता पुल तथा बाटाहरू बनाइरहेको छ । हाल स्थानीय सरकार बनेसँगै हामीले उनीहरूलाई संलग्न गराएर यी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । समग्रमा हामीले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक प्रणालीअनुरूप नै हाम्रो सहयोगलाई अगाडि बढाएका छौँ । हालको नयाँ प्रणालीमा हामीले संविधानको कार्यान्वयनलाई जोड दिएका छौँ ।
० राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले आफ्ना मित्रराष्ट्रबाट राख्ने अपेक्षाहरु बदलिएका छन् । पहिला–पहिला नेपाल सरकारले विकास सहायतामै जोड दिन्थ्यो भने हाल विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न लागेको छ । यस सन्दर्भमा स्वीटजरल्यान्डको जोड नेपाललाई विकास सहायता हो कि लगानी ?
हाम्रो दृष्टिकोणमा यी दुबै कुरालाई एकीकृत गर्नुपर्छ । हाम्रो दूतावासको नयाँ रणनीतिक योजनामा हामीले आर्थिक विकासलाई जोड दिएका छौँ । निजी क्षेत्रको संलग्नताले मात्र विकास हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । अर्कातर्फ, हामीले कार्यस्थलमै सीप सिक्ने (अप्रेन्टिससिप) प्रणालीको विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेका छौँ । किनकि, सक्षम कर्मचारी नभई आर्थिक विकास हुन सक्दैन । उद्योगहरूले पनि यो मोडेललाई मन पराएको हामीले बुझेका छौँ ।साथै नेपालको लगानीका लागि नेपालकै युवाहरूसँग ज्ञान र चासो रहेको हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
० लगानी सम्मेलनका लागि स्वीटजरल्यान्डले नेपालका लागि के कस्तो तयारी गरेको छ ?
निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हामीले यस मञ्चलाई बुझेका छौँ । विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त नीतिगत वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा केही काम भइरहेको मेरो बुझाइ छ । यद्यपि हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने यस्ता मञ्चहरू ठूलो परिमाणको लगानीबारे मात्र नभएर उदाउँदा साना व्यवसाय (स्टार्टअप) बारे पनि हुन् । वास्तवमा सिर्जनात्मक आर्थिक विकासका संवाहक स्टार्टअप नै हुन् । सुरुमा एप्पल र अलिबाबा पनि स्टार्टअप नै थिए । हामीले स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
सम्भवतः नेपाल ठूला उद्योग मार्फत् विकासको यात्रामा एकैपटक अगाडि जान सक्दैन । यसको वास्तविक आर्थिक विकास स्टार्टअपबाट सम्भव छ । भारत र चीनका उद्योगले समेट्न नसकेको क्षेत्रमा नेपालका स्टार्टअप अटाउन सक्छन् । साथै हाल विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउन पनि यिनले काम गर्छन् । स्वदेश फर्किएर यहाँ केही गर्न चाहने नेपालीको संख्या ठूलो छ । त्यसैले स्टार्टअपमा लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।
स्वीस नागरिकको नेपालमा खासै ठूलो लगानी त छैन । तर, हाम्रा केही साना व्यवसाय यहाँ छन् । उनीहरू साँच्चै नै मेहनत गर्दैछन् । तर, पनि आफ्नो वृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण पाएका छैनन् ।
० स्विस दूतावासको नयाँ रणनीतिले नेपालको प्रदेश १ लाई आफ्नो प्राथमिक कार्यक्षेत्र भनी पहिचान गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ मै मात्र केन्द्रित हुनु पछाडिको खास कारण के हो ?
पुल बनाउने लगायतका हाम्रा कार्यक्रम देशैभरि छन् । तर, स्थानीय सरकार र समुदायलाई संघीय व्यवस्था कार्यान्वयमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम भने प्रदेश १ मा केन्द्रित गरेका छौँ । अन्य दातृ संस्थाका कार्यक्रम अन्य प्रदेशमा केन्द्रित छन् । हामी सबै दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ, ताकि एउटैखालका कार्यक्रम एकै ठाउँमा नदोहोरिऊन् । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङको कोही मान्छे सहयोग खोज्दै बेलायती सहयोग नियोगसम्म पुग्यो भने उसले त्यो आग्रह हामीतिर पठाइदिन्छ र हामी त्यहाँ कार्यक्रम गर्छौँ । अर्को कुरा, हामी प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यरत छौँ । हामीलाई त्यहाँका ठाउँहरू थाहा छन् र त्यहाँ काम गर्न आवश्यक आत्मविश्वास हामीले पाइसकेका छौँ ।
० संघीय प्रणालीमा स्थानीयस्तरमा सहयोग गर्ने सन्दर्भमा एउटा नयाँ समस्या देखा परेको छ । जस्तो कि स्थानीय सरकारलाई सिधै वैदेशिक सहायता लिने अधिकार दिइएको छैन । केन्द्र सरकारले मात्रै विदेशी सहायताबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । यसले तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई समस्यामा पारेको छैन ?
मलाई लाग्छ, सबै स्थानीय तहलाई न्याय दिने भावनाले नै यो व्यवस्था गरिएको हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र रोल्वालिङ उपत्यका रहेको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको बार्गेनिङ क्षमता बराबर छैन । प्रदेश १ मा काम गर्नका लागि हामीले केन्द्र सरकारको अनुमति लिएका छौँ । यदि सरकार पारदर्शी हुने हो र विकास सहायताको समुचित वितरणका लागि इच्छुक हुने हो भने हामीले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, हामीले आगामी दिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा भने म खासै आत्तिएकी छैन ।
स्वीटजरल्यान्डमा पनि कुनै देश आएर खास एउटा प्रान्तमा मात्रै सहयोग गर्छु भनेर भन्छ भने केही समस्या आउन सक्छ । किन त्यही प्रान्त छानियो ? त्यस पछाडिको कारण के हो भनेर हामीले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, स्वीटजरल्यान्डको कर प्रणाली भने केही फरक छ । करको सबभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई जान्छ । स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको निर्णयविनै आफ्नो बजेट आफूले चाहेजसरी खर्च गर्न सक्छ । सँगसँगै, धनी स्थानीय सरकारले गरिब स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि विस्तारै त्यो चलन आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
० नेपालका धेरै स्थानीय सरकारहरू हाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमै व्यस्त छन् । यसले उनीहरूको प्रभावकारितामा असर गरेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनर्निर्माण अभियान सुस्त भएको भनेर गुनासो गरिरहेको छ । यस विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?
भूकम्पपछि न्युजिल्यान्डको क्रिस्टचर्चको पुनर्निर्माण सक्नका लागि ६ वर्ष लाग्यो । नेपाल भूकम्पपछिको छैटौँ वर्षमा पुगेको छैन । तपाईँले नेपालको पुनर्निर्माणलाई अन्य देशसँग तुलना गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, यो सोचेजस्तो खत्तम छैन । धेरै विकसित देशमा भन्दा राम्रो किसिमले यहाँ पुनर्निर्माण भइरहेको छ । अझ यस वर्ष विगतभन्दा केही छिटो काम भएको छ ।
हो, यसभन्दा छिट्टै पनि काम हुन सक्थ्यो । यो भनेको आधा पानी भरिएको गिलासलाई आधा भरी वा आधा खाली भन्नुपर्छ भन्ने विवादजस्तै हो । म त जहिले पनि आधा पानी भरिएको नै देख्छु ।
यद्यपि आगामी दिनहरूका लागि मेरा केही सुझाव छन्– पहिलो कुरा, स्थानीय निकायको संलग्नता हुनुप¥यो । यदि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिएको भए पुनर्निर्माणको गति अवश्य नै तीव्र हुन्थ्यो । अर्को कुरा, सरकारले गरिबभन्दा गरिब जनता, दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानमा रहेका जनता कसरी लाभान्वित भएका छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ ।
० पुनर्निर्माणजस्तै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना खेपेको अर्को मुद्दा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय हो । यसबारे स्वीटजरल्यान्डको धारणा के हो ?
म सन् २००७ देखि २०११ सम्म पनि नेपालमै थिएँ । सन् २००७ लाई आधार मानेर हेर्दा त्यसपछि धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको छ, सेना समायोजनको काम सकिएको छ । भूकम्पको विपदका बीच पनि संविधान बनेको छ र सबै तहमा चुनाव भएका छन् । हरेक देशका लागि विगतका मुद्दाहरू सम्वोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । यो प्रक्रिया एकदम संवेदनशील हुन्छ ।
हाम्रो भनाइ के हो भने शान्ति प्रक्रिया नेपालीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ र पीडितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नेपालका न्याय मन्त्रीले यस प्रक्रियामा पीडितलाई समेट्ने प्रतिवद्धता बारम्बार व्यक्त गर्नुभएको छ । उनीहरूसँग संवाद पनि भइरहेको छ । हाम्रो बुझाइभन्दा पर रहेर पनि भित्रभित्रै यस सन्दर्भमा उल्लेख्य काम भइरहेको होला ।
हो, यो प्रक्रिया नेपालीकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, नेपाललाई साथीहरूको पनि खाँचो छ । हामी नेपालका साथी हौँ । हामीले तिमीलाई यो कुरा दिन चाहान्छौँ भन्नुभन्दा पनि नेपालले आफूले आफ्ना साथीहरूबाट के चाहेको हो स्पष्ट बताउनुपर्छ । नेपाल खुलेर हामीसँग आउनुपर्छ र आफूले चाहेको सहयोग माग्नुपर्छ ।
विगतमा दण्डहीनता थियो । अब दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । विधिको शासन हुनुपर्छ । विधिको शासनविना आर्थिक विकास पनि सम्भव छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायले आर्थिक विकासलाई पनि असर गरिरहेको छ ।
० केही महिना अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री देश बाहिर भएको बेला काठमाडौँमा रहेका कूटनीतिक नियोगले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे एक विवादास्पद विज्ञप्ति जारी गरे । यसबाट नेपाल सरकार र यहाँका कूटनीतिज्ञबीच समन्वयको अभाव भएको संकेत दिएजस्तो लाग्दैन ?
हाम्रा लागि त त्यो विज्ञप्ति हामी सरकारकै साथ छौँ र हामी नेपाललाई सहयोग गर्न चाहान्छौँ भन्ने कुराको संकेत थियो । त्यहाँ अर्को महत्वपूर्ण सन्देश के थियो भने हामी यस सन्दर्भमा काम भइरहेको हेर्न चाहान्छौँ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।
० आगामी तीन वर्षपछि तपाईँको कार्यकाल सकिने बेलासम्म हालका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरु आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी नयाँ चुनाव गराउने तयारीमा हुनेछन् । यसअर्थमा तपाईँ आगामी दिनमा नेपाल कस्तो भएको हेर्न चाहानुहुन्छ ?
म चाहान्छु यस अवधिमा जनता निराश नहोउन् । हाल नेपाली जनतालाई स्थिर जीवन र राजनीतिक अवस्था चाहिएको छ । स्थानीय सरकारले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकून् भन्ने मेरो चाहना छ । यसका लागि उनीहरूलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । पर्याप्त कर्मचारी र स्रोत साधन दिइनुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारले एकअर्काका विरुद्ध काम गर्ने होइन, मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनुपर्छ ।
गत वर्ष नयाँ सरकार निर्वा्चित भएपछि सबैतिर नयाँ उत्साह र उमङ्ग थियो । अब त हनिमुन अवधि सकिएको छ । सरकारले काम गरेर नतिजा देखाउनुपर्नेबेला आएको छ । मलाई लाग्छ, केही राम्रा काम भइसकेका पनि छन् । तर, सबै जनताले ती थाहा पाएका छैनन् । कुनै स्रोतसाधनविना नै कति स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखले महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । यस्ता कुरा जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ ।
० अन्त्यमा, नेपाली जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
तपाईँहरूसँग देश बनाउने एक विशिष्ट मौका छ । तपाईँको देश आफैँमा संसारका सबैभन्दा सुन्दर देशहरूमध्ये एक हो । नयाँ संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि हरेक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुपर्छ । त्यससँगै तपाईँको समाजले नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ, ता कि उनीहरू अवसरको खोजीमा विदेशिनु नपरोस् । यो कुरा आर्थिक अवसरसँग मात्रै नभएर सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिएको छ । युवालाई आफ्ना सपना पूरा गर्न, अनि सिर्जनात्मक हुन ठाउँ दिनुहोस् । नेपाललाई उनीहरूको खाँचो छ ।